watchOS 6.2.5 yave kuwanikwa | Ndinobva mac
watchOS 6.2.5 yave kuwanikwa
Maawa mashoma apfuura Apple yakaburitsa zviri pamutemo vhezheni itsva yeApple Watch, mune iyi kesi iri WatchOS 6.2.5 uye inosvika inenge yoga. Ehe, iyo nyowani vhezheni yeApple Watch inoshanda sisitimu inofambidzana neyeGold Master Master vhezheni yeIOS 13.5, iPadOS 13.5 uye tvOS 13.4.5, asi ndiyo yega inoshumwa zviri pamutemo kune vese vashandisi.
Kuuya kweiyi vhezheni nyowani yevashandisi hakuneyi neshanduko huru kupfuura yakajairwa bug fixes, chengetedzo bug fixes uye nezvimwe. Iyo iOS uye iPadOS shanduro dzinowedzera iko kuita kwekuvandudza kwe Chiso ID ine masiki, chimwe chinhu chakanyanya kudiwa nevashandisi, asi izvi zvichafanirwa kumirira kusvikira vhezheni yepamutemo yaburitswa, iyo inogona kusvika svondo rinouya.
About Wiki MacOS Catalina Parizvino hapana chinhu, saka isu tichafanirwa kumirira kuti tione kana nhasi tine chero nyaya nezvazvo. Chero zvazvingaitika, sezvatinogara tichitaura, idzi shanduro dzekupedzisira hadzitore nguva kuti dzisvike sezvo vachiwanzoburitswa kubva kune rimwe zuva kuenda rinotevera. Tichaona kana Apple yaburitsa iyo Golden Master vhezheni ye macOS Catalina.
Kuisa iyi vhezheni itsva paawa isu tinongofanira kuenda kuWatch application uye tinya pairi General> Software kugadzirisa. Kana iwe uine otomatiki zvigadziriso zvakagoneswa zvinokwanisika kuti husiku huno ichaiswa pawachi yako, chero zvodii hazvibhadhare chero chinhu kuitarisa. Rangarira kuti kumisikidza idzi shanduro nyowani, wachi yacho inofanirwa kunge iri makumi mashanu muzana kubhadhariswa uye kuisa pachachaja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6.2.5 yave kuwanikwa
Chepamusoro: Apple inosvika yechina muFortune 4
Mutsva Kudada mabhanhire eApple Watch. Nike yaisanganisira.